CANAIMA GNU / LINUX: Hanao ny enti-modinao fotsiny? | Avy amin'ny Linux
Linuxero | | Fitsinjarana, GNU / Linux, About us
Ny tontolon'ny dFizarana Linux Tena malalaka izy io, mpamorona marobe erak'izao tontolo izao no nanao fandraisana anjara lehibe ary samy nanandrana nanao izay vitany ny tsirairay tamin'izy ireo mba hanolotra tontolo manodidina antsika tsara hivezivezy amin'ny Internet ary hampiasa solosaina tsy ara-dalàna hanatanterahana asa an-tapitrisany amin'ny solosaina finday. Ity dia ampahany amin'ny hatsaran'ny Linux. Na izany aza, mahafaly ny mahita rehefa manohana rindrambaiko sy Linux maimaimpoana ny governemanta sy ny andrim-panjakana, toy ny tranga any amin'ny Repoblika Bolivariana ao Venezoela, izay namporisihin'ny governemantan'ny famoronana. Canaima GNU / Linux, ny distro vita any Venezoela.
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy, “Canaima GNU / Linux dia a tetikasa sosialy sy teknolojia misokatra, namboarina niaraka, nifantoka tamin'ny fampivoarana ny fitaovana sy ny maodely famokarana miorina amin'ny Teknolojian'ny fampahalalana (IT) Tsy misy rindrambaiko sy rafi-pandaminana ...
Ity fizarana ity dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fifanarahana teo Venezoela y PortugaIzy sy ny tanjon'izy ireo lehibe indrindra dia ny hanomezana fahafaham-po ny filàna ara-panabeazana ilaina any Venezoela; io koa dia ny Operating System of the laptop antsoina hoe "Canaimita" fizarana maimaimpoana amin'ny ambaratonga fanabeazana fototra ao Venezoela, ary ho fanampin'izany dia rafitra fiasa ofisialin'ny andrim-panjakana ao Venezoela izy. Natomboka tamin'ny solosaina birao izy tamin'ny voalohany, na dia mampiseho ny fampifanarahany amin'ny solosaina finday sy finday aza ireo kinova farany farany.
Laptop laptop Canaimita
Na dia torontoronina ho a SO ho an'ny fanabeazana, tsy voafetra amin'ny fampiasany fotsiny ny "fanaovana enti-mody." Canaima GNU / Linux dia manana fampiasa isan-karazany ary mikasa hisarika mpampiasa bebe kokoa amin'ny Free Software.
Mianatra Linux amin'ny sekoly ambaratonga voalohany
Ankehitriny, Canaima dia mifototra amin'ny Debian Noho ny tombony be dia be ao aminy ary ny fanehoan-kevitra momba ny fonosana Canaima GNU / Linux misy anay dia misy amin'ny kinova 4.1, ny sasany amin'izy ireo dia natokana ho an'ity distro ity ary novolavolain'ireo mpandahatra fandaharana Venezoeliana.
Fanavaozana ny lozisialy:
Cunaguaro 8.0 (Fandraisana HTML5 feno)
Ucumari: Ivotoerana fanaraha-maso miorina amin'ny Ailurus
Canaima Installer: mpiorina vaovao voasoratra amin'ny Python
Ivotoerana rindrambaiko: Ivotoerana fametrahana apetraka
Ny fampiharana izao dia tafiditra ao anaty ISO:
Mpanonta horonantsary Pitivi
Mpanadihady momba ny kapila
Fitaovana fidirana ifotony
Ankoatr'izay, ireto fanatsarana manaraka ireto dia natao:
Ny fandaminana indray ny takelaka mba hanitsiana ny habaka arakaraka ny Netbooks sy ny takelaka.
Fomba fijery vaovao ho an'ny Plymouth Starter Loader.
Famerenana amin'ny laoniny ny hazo fiankinan-doha hanaisotra fonosana tsy ilaina: gnome-core, dmz-cursor-theme, gnome-themes, gnome-icon-theme, evolution, evolution-common, epiphany-browser, epiphany-browser-data.
Ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka an'io fizarana io dia:
1.- Namboarina tanteraka tao free software.
2.- Tena izany fiarovana, satria i Canaima dia miorina amin'ny kinova Debian GNU / Linux ary mandalo fitsapana kalitao henjana izy.
3.- interface interface friendly ary tsotra ho an'ireo mpampiasa tsy manana traikefa Linux.
Nisy fandavana iray no tsikaritra, izany dia mety noho ny tsy fahampian'ny fahalalan'ireo mpampiasa na ny fiovana midika hoe fifindra-monina amin'ny rafitra fiasa iray mankany amin'ny iray hafa, tsy ny mpampiasa rehetra no liana hiasa amin'ny Linux ary sarotra kokoa izany rehefa tsy manana izany fahalianana izany izy ireo. hahitana ny tombotsoan'ny OS.
Izay no antony nahasarihana ny saiko ny fampiharana "Welcome Canaima" mikendry ireo mpampiasa vao manomboka amin'ny fampiasana Linux. Isika koa dia manana ny Ivotoerana fanaraha-masol (Ucumari), ity fampiharana ity dia manamora ny fikirakirana ny rafitra izay tsy azon'ny mpampiasa atao loatra, manome azy ireo fotoana hanovana azy ireo araka izay itiavany azy, hahafantatra ny toetran'ny rafitr'izy ireo (capacities, fitaovana napetraka, sns.), hametrahana ny politika famerana; Manome azy ireo lisitr'ireo programa mahaliana hapetraka ihany koa izy ireo, miaraka amina sokajy antsoina hoe "Vita amin'ny Venezoela" miaraka amin'ireo fampiharana izay novolavolain'ny ekipan'i Canaima. Misy ihany koa ireo rindranasa ao amin'ny kinova 3.1 ny Orca ary ny Gök izay rindranasa tonga tsy mandeha ho an'ny olona manana fahasembanana amin'ny fahitana.
Ho an'ireo izay liana amin'ny fanandramana Canaima GNU / Linux ary mitsidika ny trano fitehirizana dia eto ny adiresy: Repoblika ofisialy Canaima
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CANAIMA GNU / LINUX: Hanao ny enti-modinao fotsiny?
51 hevitra, avelao ny anao
rmarquez dia hoy izy:
Ny olan'i Canaima dia tsy momba ny fahaiza-mampifanaraka fa ny fifantohana satria ny distro dia novolavolaina tamin'ny voalohany tao an-tsaina ny fitantanan-draharaham-panjakana ary izany no sakana lehibe indrindra nananany rehefa nanapa-kevitra ny CANTV nanomboka ny iray andro ka hatramin'ny manaraka, ny manolotra azy io amin'ny alàlan'ny solosaina sy solosaina finday izay nivarotra tamin'ny fandaharana "ABA internet fitaovana" izy ireo, mbola tadidiko fa tamin'ny 2010 - 2011 (izay nanoloran'ny CANTV ny Canaima Linux tamim-pahagagana) ny ekipan'ny fampandrosoana Canaima dia olona 10 no betsaka indrindra ary mazava ho azy ireo fa tsy vonona ny handroso amin'ny mpampiasa farany, ny valiny? Mazava ho azy fa nolaviko ary raha ny marina dia tadidiko fa tsy maintsy nifindra monina solosaina maro izay namidin'ny CANTV niaraka tamin'i Canaima Linux tany Ubuntu Linux aho satria sahy tokoa ny fametrahana Google Chrome ohatra, satria araka ny nolazaiko tany am-piandohana, ny distro dia natao hampiasaina amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny fahazoan-dàlana. amin'ny resaka fametrahana rindranasa, dia natao tao amin'ny tontolo voalaza etsy ambony.
Mikasika an'i Portugal, tsy momba ny fampandrosoana an'i Canaima ny tenany fa ny canaimitas sy ny takelaka atolotra any amin'ny oniversite, izany hoe, ny fiaraha-miasa dia eo amin'ny haavon'ny fitaovana fa tsy rindrambaiko.
Fiarahabana avy any Caracas - Venezoelà
Mamaly an'i rmarquez
Ny saka Lopez dia hoy izy:
Misaotra tamin'io fanazavana mazava io ...
Fiarahabana avy any Bogotá Colombia
Valiny tamin'i El Gato López
Eny, tsara ... raha tsy ny zava-misy fa ny canaima dia tsy mandray anjara amin'ny zava-misy marina dia azo lazaina fa ezaka mahafinaritra izany.
Mampalahelo fa endrika politika fotsiny ny milaza fa mandroso amin'ny lafiny teknolojia ny firenena iray, ankehitriny ny olona roa dia afaka manamboatra distro iray manontolo feno kokoa noho i Canaima, ary na dia am-boalohany kokoa aza (Solus amin'ny fiandohany, ohatra).
Canaima dia izany fotsiny, fampielezan-kevitra politika ary fitaovana iray hampiasana proselytisme politika any an-tsekoly.
Robert Barajas dia hoy izy:
Ankoatra ny fampielezan-kevitra politika dia distro tsy misy mpanohana firy izy, tsy nahavita nanavao ny rafitra na dia indray mandeha aza, foana ny loharanom-baovao.
Valiny tamin'i Robert Barajas
Mino aho fa ianao no manao proselytizing politika dia ianao, ary tsy vao izao izany. Azoko tsara fa bilaogy iray momba ny GNU Linux ity fa tsy momba ny politika, azonao atao ny mamoaka ny toerana ara-potokevitrao amin'ireo tranonkala natokana ho azy. mahafaly
Alejandro TorMar dia hoy izy:
Ry namako, na inona na inona tsy fanirian'ny olona hampiarahana amin'ny governemanta io fanapariahana io ... Talohan'izay [tsy haiko izao] dia efa voalaza momba ny canaima "Namboarina tamin'ny sosialisma"
Tsy mila manarona ny masoandro amin'ny rantsan-tànana ianao, na dia te hahita azy io ho toy ny distro GNU / Linux, dia hampifandraisina amin'ny governemanta sy ny tombontsoa sasany ... Te-hahita an'i Windows afaka amin'ny Microsoft aho [zavatra iray tsy azo atao] Te hahita ny OS X afaka amin'ny Apple aho [Zavatra tsy azo atao] ... Izany no mitranga amin'i Canaima ... Ary tsy zavatra misy fiantraikany amiko izany satria tsy avy any Venezoelà aho, fa tsy te hiditra an-tsehatra na inona na inona amin'ny politika, na eo amin'ny governemanta, izany no mahatonga ny fampiasana azy fotsiny na ny fanandramana azy, tsapako fa handeha sosialista aho na mitsikilo ahy i Maduro [fantatro fa paranoida sy hadalana izany fa izany no tsapako]
Valiny tamin'i Alejandro TorMar
Jamin samuel dia hoy izy:
Mahitsy .. tena marina
Valiny tamin'i Jamin Samuel
Bitl0rd dia hoy izy:
Tongava namana, tsy mino aho fa manao politika i nano. indrisy fa ny zava-misy.
Mamaly an'i Bitl0rd
Amin'ny ankapobeny araka ny teninao dia toy izany ihany koa no mitranga any amin'ny firenena, Arzantina, fampielezan-kevitra politika madio ary tsy miteraka zava-tsoa izany.
Mamaly an'i hugo
Ry namako, tsy fantatrao izay anananao.
Any amin'ny fireneko dia tsy manome na inona na inona maimaim-poana izy ireo, tiako raha manome solosaina amin'ny Linux ny ankizy.
Sobe Canaima dia sosona iray amin'ny debian miaraka amina programa fanampiny. ka tsy mety ho ratsy.
Mamaly an'i pepe
Karoty Elliot dia hoy izy:
Ilay "Nano" izay mitantana ity bilaogy ity dia maniry hatrany ny hanala ireo tetik'asa na hevitra tsara ary mirona hanao azy ireo ho mahery fihetsika, adala na ratsy. Richard Stallman dia niresaka momba ny loza ateraky ny lozisialy fananana an-taonany maro. Inona no nianarantsika tato ho ato? Eny, tsy misy mihoatra noho ny fitsikilovana goavambe ataon'ny orinasa miaraka amin'i Etazonia Ny zavatra mampalahelo dia ity "Nano" ity dia manohy manisy marika an'i Richard Stallman ho adala sy mahery fihetsika, tsy miraharaha ny asa lehibe ataon'ity lehilahy ity ho an'izao tontolo izao.
Ny marina dia "Nano" dia bandy tsy mahay maneho ny heviny am-panajana. Ka tsy mahagaga raha tsy nahomby ny fantsona YouTube azy (mircrokernel fa fahatsiarovana ratsy). Manantena aho fa ity "Nano" mitantana ity bilaogy ity, dia manomboka mihevitra zavatra matotra satria zavatra tsy hitako io raha nahita horonan-tsary momba azy aho, jereo ny naharetan'izy ireo mihoatra ny adiny iray.
Manantena aho ary hanaja ny hevitro ary hamoaka azy.
Ny tiako holazaina dia manontany an'ireo mpijirika an'ity bilaogy ity na amin'ny mpamaky hoe: Tianay ve ny GNU-Linux? Tokony hasehonao amin'ny fanoloran-tena izany, satria amin'ny farany ny GNU-Linux dia ny fizarana rehetra, aza fanatisme amin'ny iray fotsiny, andao hanohana ny tetikasa rehetra na distros 100% maimaimpoana na tsy maimaimpoana loatra, na avy amin'ny governemanta na tsia. Canaima any ary ary GNU-Linux. Izy ireo sa tsia GNU-Linux?
Toy izany koa, tsy manam-pahaizana momba an'io lohahevitra io aho, fa amin'ny vola enti-miasa kosa aho dia miasa mba hanaparitahana rindrambaiko malalaka na loharano misokatra ary tsy manala ny tetik'asa amin'ny antony mihoatra ny diso. Miresaka ny tombontsoa lehibe azo avy amin'ny GNU-Linux aho. Maniry aho mba tsy ho saribakolin'i Etazonia ny governemantako ary handray fanapahan-kevitra miaraka amintsika ny vahoaka. Mila GNU-Linux miakanjo charro miaraka amin'ny tequila xD ajajajjajaja aho
Fantatro ny GNU-Linux meksikana iray saingy efa nitady azy ireo aho nefa toa tsy misy intsony ny pejin'izy ireo. Tiako ny manohana azy ireo saingy efa an-taona no nampiasako ny GNU-Linux ary tsy afaka nampahafantatra azy ireo intsony ny momba ny deraiko sy ny RESPECT aho.
Midera an'i Venezoelà aho, avy any Mexico 😀
Mamaly an'i Elliot Carrot
Angamba raha toa ka tsy mamorona distro miorina amin'ny Debian sy manohana izay efa misy toa an'i Ubuntu, na afaka zato isan-jato dia malalaka ny fanohanana (Ary ampidiriko ny tenako) Fantatrao ve fa ny FSF sy Stallman dia tsy manohana an'i Canaima sy ao zava-misy manontany ny olona tsy hametraka azy io? Fantatrao ve fa izay ataon'i Stallman dia manala baraka ireo distros Linux manerantany? Fantatrao ve fa na ny distro ampiasainao aza - fedora - dia ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny FSF sy Stallman voamarika fa tsy azo ampiasaina?
Ka na ny FSF na Atoa Stallman aza tsy manohana ny distro Canaima
Zavatra iray hafa, mbola tsy nahavita tsara mihitsy aho tamin'ny distros maimaim-poana 100% ... Ary raha ny fanirianao ny hanohana ny GNU sy Stallman, dia ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamafa an'i Fedora ary hametraka ny iray amin'ireo distro ireo ... holazaiko ianao fa nanimba solosaina roa manokana nataoko tamin'ity hetsika ity ary mieritreritra aho fa raha misy olona mitsikera an'i Stallman, dia manana antony hanaovana izany izy ireo
Ry namako, noho izany ny zavatra tsy maintsy ataonao raha te hanohana feno ny rindrambaiko maimaimpoana ianao dia ny mamafa ny Fedora ary mametraka Trisquel mba tsy hifanohitra amin'i Andriamatoa Stallman ary tsy hampiasa distro tsy eken'ny FSF ho 100% maimaimpoana ... ialao ny fampiasana tambajotram-pifandraisana tambajotra, ankoatry ny tsy fampifandraisana amin'ny alàlan'ny Wi-Fi amin'ny Internet, ankoatry ny zavatra hafa mitaky rindrambaiko manana (toa tsy dia mihoa-pampana ve izany?)
Efa ela aho no tsy teo amin'ny mpiasan'ny bilaogy, tsy omen'ny fotoana ahy izany.
Hita fa nilaza momba an'i Stallman aho fa mahery fihetsika izy satria raha ny tena izy dia ... na inona na inona fikasana, saingy mahery setra izy, ary ny mahery izaitsizy dia tsy tsara mihitsy.
Ary tsy tonga mba handrefesana ianao fa marina i Stallman nandritra ny taona maro satria nahavoa izy (haben'ny habeny, tsy azo lavina izany), raha sendra izany dia tsy maninona na avy amin'ny olona iray izay manala baraka ireo distros hafa noho ny tsy naha-izy azy ireo.
Mikasika ny Microkernel, raha ny zava-misy satria nataonao tamina ezaka iray nataonao manokana sy nianjera tamin'ny fihoaram-pefy izay iampanganao ahy rehefa milaza ny tenako ianao dia tsy nahomby ho ahy izany, na ho an'i gonzalo, raha ny marina dia nitombo niaraka tamin'ny kabary tsirairay ary tiako be izany tao anatin'ny vondrona nahita anay, nifarana izy io satria toy ny zavatra maro hafa, ny fotoana dia tsy mamela zavatra izay mitaky ezaka sy fifantohana be loatra.
Miarahaba, manantena aho fa afaka mianatra miresaka tsara kokoa momba ny hafa ianao.
Raha tsy nisy ifandraisany amina governemanta izany dia izaho manokana no hanohana sy hampiroborobo azy ... Saingy ao anatin'ireo toe-javatra ireo dia tsy manohana azy aho na mampiroborobo azy ...
Nohitsiko hoe: "Raha tsy nifamatotra tamin'ny governemanta izany, dia izaho no hanohana sy hampiroborobo azy ... Saingy eo ambanin'ireo toe-javatra ireo, dia tsy manohana azy aho na mampiroborobo azy ..."
Salama miarahaba ..
Avy any Venezoelà aho, fantatro tsara ny raharaha
Dia averiko indray «Ny Canaima dia tsy miorina amin'ny mpampiasa farany, na ny mpampiasa oniversite aza, ny tena olana amin'ny canaima dia ny tsy fampiasana ny toeram-pitrandrahana ofisialy Debian, mifototra amin'ny eny izany, fa miasa miaraka amin'ireo fonosana meta izay avy ao anatiny toerana fitahirizam-bokatra sasany eto Venezoela.
Inona no ifandraisany amin'izany? Tsotra tokoa, fa raha hametraka Google Chrome na fampiharana hafa mila misintona fiankinan-doha sasany ianao dia tsy ho hitanao izany satria tsy mampiasa ny repos Debian ny distro, dia ajanona ireo fampiharana nefa tsy afaka mahita ilay fiankinana voalaza, noho izany afaka mametraka.
Ohatra maromaro toy izany dia misy maromaro.
Heveriko fa i Canaima raha hijanona ao amin'ny Debian Stable izy ireo dia tokony hampiasa ireo repo sy fitaratra Debian tany am-boalohany ary hanadino ny toerana fitahirizam-bahoaka Venezoeliana.
Hevitra manokana fotsiny izany
merlinoelodebianite dia hoy izy:
Tsy mbola nanandrana canaima mihitsy aho, fa raha mifototra amin'ny debian ary misy terminal, tsy ho mora ny manampy ireo repo debian ho canaima na esorina tsara kokoa ny repos Venezoeliana ary hametraka ireo repos stable debian, zavatra efa nataoko taloha be rehefa nivoaka Nanova ny repo ho fanandramana izahay sy LMDE ary niasa tsy nisy olana izany, fa raha ny canaima dia miorina amin'ny debian dia ampy ny manova ny listl.list, marina? Tokony ho azo atao izany.
Fa inona no ho fantatro raha mampiasa debian fotsiny aho.
Mamaly an'i merlinoelodebianita
koprotk dia hoy izy:
Ny hevitra mifindra monina sy manohana fizarana Linux dia toa tsara amiko, etsy an-danin'izany mamorona fizarana, misy an'arivony ary tena tsara, mahatonga ahy hieritreritra indray hoe maninona tsy hampiasa debian fotsiny. Fa mbola Long Live Free Software.
Mamaly an'i koprotk
Indraindray aho dia namaky fanehoan-kevitra mitovy amin'ireo voalaza eto momba ny rindrambaiko maimaimpoana momba an'i Kiobà ary tsy azoko izany.
Raha avy any Kiobà na any Venezoelà aho dia mirehareha fa nisy rafitra fandidiana maimaimpoana natsangana tao amin'ny fireneko, na dia tsy ny soa rehetra aza no tadiavina. Saingy hiady aho mba ho tsara sy tena izy avy any amin'ny fireneko ary afaka mianatra sy mampivelatra izany ireo ankizy ao am-pianarana.
Hevitro io, mazava ho azy, ary tsy te ho tonga amin'ny toerana tsy iantsoan'izy ireo ahy aho.
Jose Casanova dia hoy izy:
Hevitra tena tsara!
100% no manohana ny hevitrao.
Valiny tamin'i José Casanova
raha mandeha izy nefa manome lesoka maro amin'ny atiny sasany. ianao koa mila maka tahaka ny atiny avy amin'ny / usr / nozaraina satria tsy azonao atao ny misintona an'io atiny io ao amin'ny toerana anaovany azy.
Raha mirehitra ny firaketana, ahoana no hamerenanao an'io canaimita kely io?
tonga ny fotoana hananganana azy io satria tsy misy fomba hafa
Ny teny miafina root, grub dia ohatra fotsiny, tsy azonao atao ny mametra zaza na adolantsento efa fandaharana dieny mbola kely.
Ary tsy ny ankizy ihany no misy canaima ho an'ny mpampianatra sy ny tanora.
tsara raha ny marina, ireto canaima ireto dia manana fanohanana mahatsiravina ianao dia tsy mandeha ny trano fitehirizan-dry zareo, raha toa ka simba ny grub na zavatra toa izany dia tsy manana fomba hamerenana ny rafitra ianao satria ny governemanta dia manana masomboly hanangona azy ireo raha misy bibikely na fanavaozana. ary amin'ny pejin-tranonkalanao dia tapaka ny rohy
raha milaza ianao raha te hametraka canaima 4.1 amin'ny canaimita dia tsy afaka mametraka ny atiny fanabeazana ianao satria tsy mifanaraka ny repositories ...
ny rafitry ny fanabeazana dia tsy mifanaraka afa-tsy amin'io rafitra io raha tianao ny hametraka ny atiny fanabeazana amin'ny distro hafa izay tsy azonao ..
Ny maimaim-poana dia tsy manana na inona na inona ary tsy manome fanalahidy faka tsy manohana fizarana hafa .. ny fomba fanalahidy dia azo amin'ny fomba hafa ..
pd nano dia misy ampahany marina ... izay monina eto ihany no mahalala ny zava-misy
Wryyyyy dia hoy izy:
Nataoko ny rindrambaiko fanabeazana ao amin'ny Debian. Izy ireo dia ankamaroan'ny horonan-tsary sy fampisehoana natomboka tamin'ny alàlan'ny script .sh, tsy mandeha izy io satria ny canaima taloha dia nitondra OpenOffice ary ny canaima kinova vaovao nitondra libreoffice ary koa debian sy fizarana hafa
Valiny tamin'i Wryyyyy
Mpampiasa mahazatra, fa na ny zaza any am-pianarana aza, tsy mila lakilen'ny faka, raha ilaina izany dia afaka manatona teknisiana mahalala gnu / linux, izay afaka manova ny teny miafim-paka raha manana fidirana ara-batana amin'ny solosaina sy grub. Zavatra azo atao amin'ny canaima, ubuntu, sns.
MyMyselfAndI dia hoy izy:
Rehefa tonga tany amin'ny 'República Bolivariana de Chavez… Venezoelà' dia najanoko ny famakiana
Valio amin'ny MyMyselfAndI
Mahagaga ahy ny tsipelina diso nataonao sy ny sainao
Linuxero dia hoy izy:
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra!
Mikasika ilay lohahevitra, ampahatsiahiviko anao fa fanohanana rindrambaiko Maimaimpoana izy io. Ny tontolon'ny fizarana dia malalaka be, ny sasany lasa fenitra ary ny hafa midina amin'ny tantara, ny sisa tavela dia ny Linux sy ny fikasan'ny ekipa tsirairay.
Ny zava-dehibe marihina dia ireo firenena efa mahatsapa fa mila mampiofana sy manangona mpiasa IT amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Betsaka ny olona tsy midoboka amin'ity faritra ity satria tsy nifandray tamin'ireto olana ireto mihitsy izy ireo ary tsy miafina amin'ny rehetra ny tsy fahampian'ny mpiasa IT manerantany.
Misy accents politika ... "Rehefa manatody atody ny akoho dia mihenjana." Tsy izany no distro tsara indrindra ... Fa izay dia mpankafy sy manam-pahaizana izay afaka manampy izahay.
Mbola tiako ny misaotra anao noho ny fandraisanao anjara sy ny arahaba ho an'ny Venezoeliana!
Valio i Linuxero
Alex Ricardo dia hoy izy:
Setroka madio: "rafitra fiasa ofisialin'ny andrim-panjakana ao Venezoela." Izy rehetra dia mampiasa Windows piraty avy amin'ny LanderXtremo. Canaima dia fandraisana andraikitra tsara, saingy nampalahelo fa nampiasaina ho an'ny proselytisme politika ary tsy nanohana azy velively ho dingana mandroso hampivelatra ny teknolojia.
Valiny tamin'i Alex Ricardo
Miarahaba antsika namana teknolojia malala,
Voalohany indrindra dia feno fankasitrahana aho tamin'ny famoahana ity lahatsoratra ity izay nideranan'izy ireo sy nijereny ny tombotsoan'ny rafitra fiasan'ny Canaima GNU / Linux, izay natao tany Venezoela.
Faharoa, zava-dehibe ny manasongadina sy manitsy fa ny rafitry ny Canaima GNU / Linux dia miorina amin'i Debian ary io fizarana io dia novolavolaina 100% NA VENEZUELAN TALENT; Ny fiaraha-miasa amin'i Portiogaly dia manondro ny famatsiana fitaovana (solosaina finday) nantsoinay «Canamitas», namboarina hiasa tsara amin'ny rafitra fiasanay Canaima ary zaraina sy ampiasain'ny ankizy mianatra.
Misaotra anao sy ny fiarahamonina Linux iray mitsidika an'ity bilaogy manan-danja ity.
San Antonio de los Altos - Venezoelà
Ry namako, ny talenta dia tsy Venezoeliana 100%, 100% Debian GNU / Linux ...
Miarahaba anao, antenaiko fa ao amin'ny fireneko Chili dia nanana hetsika tahaka izany isika.
Hannequin dia hoy izy:
Fahadisoana mahatsiravina tokoa ny fanaovana politika ny zavatra, mihoatra ny zava-drehetra ao amin'ny faritra misy antsika IT ny fanaovana politika fizarana rindrambaiko maimaimpoana, manana ny lesoka i Canaima, marina fa kely ny ekipa Fampandrosoana ary ny fanohanan'ny fiarahamonina dia tsy kalitao faran'izay tsara. . Saingy asa iray izay nitaky ezaka lehibe tamin'ny fiheverana fa ny fizarana dia mandeha amin'ny besinimaro izay mandalo avy amin'ny mpampiasa iraisana izay tsy mila mametraka zavatra be loatra amin'ny solosainy ankoatry ny miasa, amin'ny mpianatra ary amin'ny asan'ny ny fitantanan-draharaham-panjakana, misy ahy izay misy ny iray amin'ireo mpandahatra fandaharana tsara indrindra mampiasa ny canaima ho OS ary ny fampiononana ny asa na dia tsy maintsy mipetraka amin'ny pc-ny aza aho dia tsara kokoa noho ny an'ny hafa izay misy Linux Mint na Debian 8 ampiasaina.
Tandremo, tsy ataoko ambanin-javatra ireo fizarana mandroso kokoa noho i Canaima, ny tiako holazaina dia hoe na dia eo aza ny lesoka dia fizarana "marin-toerana" ho an'ireo izay mahay mampiasa azy io, mankasitraka azy ary manaja azy araka ny tokony ho izy, Mazava ho azy fa ny faharetana ilaina.
PS: Tsy tokony hatao ambanin-javatra ihany koa ny Fitaovan'ny masinina, azo ekena ihany ny milaza ny marina, fa ny fanehoan-kevitra tsara dia afaka mampandeha programa izay tsy iaretan'ny PC andrim-panjakana maro na dia birao iray aza, izay na izaho aza manohana azy, ny Ny tanjona dia ny hampitsaharana ny fanaovana politika sy ny fanohanana izay mivoaka avy amin'ny tanintsika.
Valiny tamin'i Hannequin
Marina lopez dia hoy izy:
Na inona na inona lazain'izy ireo, ny tetik'asa SL dia momba ny politika foana, sa tsy natao hialana amin'ireo ampihimamba lehibe mitady hisambotra fahalalana? Faharoa, ireo olona mody miresaka momba ny tsy fahombiazan'ny tetikasa Canaima, manasa anao aho mamaky ny sekoly ary jereo ny fomba ankafizan'ny ankamaroan'ny ankizilahy sy zazavavy ao Venezoela ny canaimita-n'izy ireo ary mianatra miaraka amin'izany (ataoko amin'ny fananana rehetra ity fanehoan-kevitra ity, satria ny zanako vavy sy ny zanako lahy dia manana ary isaky ny misy mampiseho ny heviny. Mamindra izany amin'ny varavarankely dia mivoaka hiaro ny canaimita izy ireo). Afaka mihatsara? Mazava ho azy fa azo hatsaraina, ny azoko antoka fa ny fanaovana ireo fanehoan-kevitra misy poizina ireo dia tsy manampy na ny tetikasa Canaima na ny fampiroboroboana ny fampiasana teknolojia maimaim-poana, any Venezoela 4 tapitrisa Canaimita ihany no natolotra, miaraka amin'ny SL, izay tonga ny sasany tezitra (tsy milaza aho fa eto dia manana lolompo isika) milaza fa maro amin'ireo no nifindra monina tany am-baravarankely, marina izany ary marina ny azy, ny fanontaniana dia ny hoe inona no ataontsika hamerenana izany toe-javatra izany, ankoatr'izay inona no ataontsika mody? tsy mitranga izany? Mieritreritra aho fa manandrana manarona ny masoandro amin'ny rantsantanana iray ary raha tsy mino ahy ianao dia misy miteny amiko hoe inona ny tahan'ny fitomboan'ny fampiasana SL tato anatin'ny 5 taona lasa, maro amin'ireo mpaminanin'ny loza no milaza amiko hoe firy no manana boot roa ianao miaraka amina windows? firy no manome soso-kevitra ny fampiasana ny SL ho safidy voalohany Maro amin'ny vondrom-piarahamonina no mahazo ny hives hahafantatra fa ny tena filan'ny rindrambaiko dia nomena noho ny politikan'ny governemanta Bolivarian fa tsy noho ny fahamendrehantsika ary zavatra tsy azo lavina izany. , raha niresaka momba ny tsy fetezana izahay toy ny hoe tsara kokoa raha toa ny gnome na ny kde ny tompon'andraikitra ary nanosika azy hanao izay hamelezana azy, indrisy fa maro no niaro am-pahibemaso ny hevitra iray fa mino ao an-toerana ny utopiana izy ireo, tsy noheverin'izy ireo mihitsy hoe tena mety ho politika nasionaly amin'ny fampiharana. Izaho manokana dia miombon-kevitra amin'ireo tsikera sy adihevitra, fa miaraka amin'ireo tarehimarika, miaraka amin'ny porofo azo tsapain-tanana fa tsy maneho hevitra momba ireo mpanatrika, satria ny milaza fa fanapahan-kevitra ratsy hanaterana solosaina miaraka amina fizarana maimaimpoana amin'ny alàlan'ny toerana misy anao dia ny fametrahana ny hadalana aloha milaza fa avy amin'ny vondrom-piarahamonina izy, vao mainka aza mihevitra fa ny ankamaroan'ny tsikera novakiako dia tsy natao ho an'ny tetikasa fa ho an'ny fizarana rehetra. Azo atao ny manatsara mazava ho azy fa afaka manatsara izay tsy azonao ianao dia mitsikera zavatra ho fialamboly, indrindra raha toa ny ankamaroan'ireo mpitsikera manimba ireo dia tsy mbola nandray anjara na tsy nitondra zavatra ho fampandrosoana ny fiaraha-monina mihitsy.
Valiny tamin'i Hector Lopez
Daniel N dia hoy izy:
Canaima = NarcoDictadura miaraka amin'ny endrika mialoha amin'ny fandrosoana ara-teknolojia.
Zava-misy = dika mitovy amin'ny rindrambaiko mavesatra Burda, tsy mandray anjara tena izy ireo fa ny tetik'asa ihany no namboarin'izy ireo, nametraka anarana vaovao sy sary masina vaovao izy ireo ary efa tian'izy ireo ho hita fa toa nanao ezaka be izy ireo. Mitandrema ary raha tsy nanova ny rindrambaiko hitsikilo anay izy ireo.
Na izany na tsy izany, tsy hampiasa canaima aho.
Valiny tamin'i Daniel N
Ny hevitrao no tsy manome na inona na inona. Ny tetik'asa rindrambaiko maimaimpoana dia azo "cloned" araka ny filazanao fa tsy misy olana. ! Heveriko fa tsy mifantoka amin'io hevitra io ny hevitrao, satria ny canaima dia tsy notendrena na dia avy amin'ny fototry ny endriny aza mba hanomezana fahafaham-po ny fialambolan'ny olona.
Angamba ny tsy fahampiana canaima dia mifandraika amin'ny drafitra ho avy amin'ny sehatry ny fidirana ao anatin'ny fitantanan-draharaham-pirenena! Manantitrantitra aho fa tsy mifantoka amin'ny resaka hevitra visceral fotsiny ny fanehoan-kevitrao fa tsy misy fototra ara-teknika.
Raul P dia hoy izy:
Salama Linuxero, ianao no mpanoratra an'ity lahatsoratra ity, manimba ity bilaogy ity ianao amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra momba ny politika.
Izay te hiresaka politika izay ho matotra, dolartoday, elnuevoherald sns ...
Ity bilaogy ity dia momba ny rindrambaiko sy ny haitao.
Valiny tamin'i Raul P
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Raul.
Na izany aza, ho an'ny filamatra ao amin'ny bilaogy sy Free Software mihitsy dia tsy mitady sivana izahay. Raha tsy misy ny fandikan-dalàna mivantana dia tsy misy ny antony fanivanana.
Toy izany koa, ialan-tsiny azafady amin'ireo mpampiasa izay taitra noho io olana io. Tsy te-hanelingelina ny hafa izahay, na hanodikodina ny tanjon'ireny toerana ireny.
Ny olon-drehetra dia efa matotra mba handray ny andraikiny amin'ny fanehoan-keviny ary ho marani-tsaina hahalala ny ambadiky ny lahatsoratra sy ny atin'ny bilaogy.
Misaotra anao amin'ny fanohananao sy amin'ny fanampianao hitazomana vondrom-piarahamonina izay avaratra dia teknolojia sy rindrambaiko.
PS: Misaotra an'ireo toerana natolotrareo mba hahafahan'ny mpisera fatratra ny fanehoan-kevitra politika lol. Lol
Tiako ny manome ny solosaina maimaim-poana ho an'ny ankizy rehetra ny fireneko ary bebe kokoa amin'ny distro linux debian, saingy misy mahita fa tsy mety ny zava-drehetra.
Tsy mety ho ratsy i canaima satria mifototra amin'ny debian izay vato.
Jolt2bolt dia hoy izy:
Amin'ny maha-Venezoeliana ahy dia lazaiko fa azo antoka fa ny tetikasa Canaima dia tetikasa tsara izay voaloton'ny toerana politika ary niafara tamin'ny kopia feno fonosana sy fonosana efa nisy izay nanovana ny sary famantarana sy ny anarana ary nomena azy ny mpanoratra. ny tena asa dia nataon'ny reny distro. Ka tsy manohana azy aho fa tsy noho ny tsy fahafaliako ny fandraisana an-tanana ny governemanta izay tsara, fa noho ny tampoka asehony amin'ny mpampiasa farany ary maharesy lahatra azy amin'ny farany fa aleony manana Windows PC toy izay Linux. Raha vao nisy nanandrana canaima dia hitako fa nieritreritra izy ireo fa ny linux dia ratsy tarehy sy archaic. Satria andao hatrehana izany, Canaima dia rindrambaiko efa lany andro sy tsy tohanana, na dia mpampiasa mahay aza dia tofoka sy mametraka distro Linux hafa, farafaharatsiny izany no nataoko. Raha ny fahitan'ny andianà mpandrafitra programa dia nahitana script na zavatra toa izany nihazakazaka tany aoriana mba hitsikilo olona tamin'ny andro voalohandohany. Ka tsy ho gaga aho raha eo izy ireo, rehefa dinihina tokoa, omen'izy ireo ho an'ny olona manana fahalalana linux zero.
Ankehitriny dia afaka nanao toa ny firenena hafa izy ireo, nanao distro ofisialy ny firenena nefa tsy nandà ny fampiasana rindrambaiko efa noforonina, fa tsy maka an-keriny ny mpanoratra azy. Amin'ny maha olona manana fotokevitra ahy dia hitako fa mahonena sy tsy misy fotony izany. ary izany no antony tsy anohanako an'i Canaima mihitsy.
P.S. Momba izany dia tsy maintsy misaotra ny governemanta amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana aho, mieritreritra aho fa tsy tokony hisaotra azy ireo amin'izany isika. Efa misy ny olona efa manomboka mampiasa linux irery (tafiditra ao amiko, ary raha ny marina debian, fedora, fivoriana ubuntu dia efa natao talohan'ny nitrangan'izany). Ny nataon'ny governemanta dia somary nanafaingana ny fampiasana azy satria nazava tamin'ny rehetra fa misy OS betsaka kokoa noho ny Windows. Ka tsy tokony hatao mihoapampana koa izany, resy lahatra aho fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia tokony hiparitaka mitovy na tsy misy ny fanampian'ny governemanta satria hita ny tombony azony.
Valiny amin'i Jolt2bolt
manaiky tanteraka ..
Mizara izany hevitra izany aho ...
Roger Waters dia hoy izy:
Amin'ny soavaly ..
Mamaly an'i Roger Waters
Heveriko fa tetikasa mendri-kaja izany, raha politika na tsia, tsy haiko izany, fa saika tsy misy firenena dia manome solosaina amin'ny Linux izy ireo ary fifandraisana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra ary zavatra iray izay tsy maintsy omena lanja izany,
Maro ny endrika amam-baravaran'ireto solosaina ireto izay nanana tanjona fanabeazana ary mampiasa azy ireo hilalaovana, dia ny mamita-tena
Andy Ramirez dia hoy izy:
Nametraka OS tsotra tao amin'ny canaima aho ary nandeha tsara izany, ary ny iray kosa nasiako Kubuntu 14.04 nefa tsy nanao zavatra betsaka aho ary tonga lafatra daholo ny zava-drehetra, mametraka fotsiny tsy manamboatra ary tena mandeha tsara izy ireo, ny mpizara repositories canaima dia tsy mandeha noho ny ny zava-misy fa ny internet avy eto venezuela dia *** noho izany, ambany foana izy ireo no mitranga.
Valiny tamin'i Andy Ramirez
Hahahahahahahahaha… Midika izany fa mamafa an'i Canaima ianao?
Hiverina aho ary hamela hevitra hafa ...
Araka ny FSF ity fizarana GNU / Linux ity:
«Ao amin'ny menio lehibe ao Canaima dia misy ny safidy« fametrahana rindrambaiko tsy maimaimpoana »izay ametrahana ny mpamily [« mpamily »] rehetra izay tsy maimaimpoana, eny fa na dia ireo izay tsy ilaina aza. Ny fizarana dia misy koa blobs ho an'ny Linux, ny kernel ary manasa anao hametraka fampiharana tsy maimaimpoana, ao anatin'izany ny Flash Player. »
Ka ny FSF dia tsy manohana azy ho 100% ary manilika ny fampiasana azy ho an'ireo mpampiasa izay manohana ny firehan-kevitra Andriamatoa Stallman
Ubuntu ary na i Debian aza tsy maimaimpoana 100% ary tsy hitako izay mitsikera. raha izany no antony dia Trisquel ihany no misy ary tsy fantatro izay iray hafa afaka 100%.
Danilo anderson dia hoy izy:
Raha miresaka rindrambaiko eto isika, ny milaza fa tsara ny Canaima, satria manome solosaina ho an'ny ankizy izy ireo, dia tsy misy dikany izany. Raha tsy nomena ny solosaina mety ho tsara ve ny rindrambaiko? Andao jerena fotsiny izay lazain'ny maro eto (anisan'izany ny tenako satria avy any Venezoelà aho) fa tsy misy dikany ny fanavaozana sy ny fanohanana, izay nahatonga an'i GNU / Linux ho mpitarika filaminana. Izy io koa dia nanjary lozisialy ankahalain'ny ankizy, tsy afaka manatsara sy mametraka azy io amin'ny tontolon'ny teknolojia miova ankehitriny.
Ary ahoana no hiresahantsika tsy momba ilay rindrambaiko fotsiny fa momba ny hoe "tsara ny fandraisana andraikitra":
Mampihomehy ny mahita hevitra vitsivitsy izay lazain'izy ireo fa miaro ny fanovana amin'ny Windows ny ankizy. Hanombohana, raha vao manome anao ny Canaima izy ireo, andrim-panjakana maro no tsy mangataka azy io intsony, noho izany tsy misy fanaraha-maso ny rindrambaiko izay ampiasaina. Faharoa, ireo ankizy ireo ihany avy hatrany dia nanova azy io ho Windows mba hahafahany milalao Counter Strike sy ireo karazana lalao ireo, izay mahatsikaiky voararan'ny fanjakana Venezoeliana mpiaro. Fahatelo, ny mitondra solosaina ao anaty kitapo dia somary mampidi-doza any amin'ny firenena faharoa misy herisetra indrindra any amin'ny kaontinanta amerikana, noho izany dia sarotra ho an'ny rindrambaiko ny mampiasa hifehezana ireo hetsika ao an-dakilasy, satria ny mpampianatra dia mahalala ny toetoetran'ny fitaterana ireo karazana fitaovana ary takatr'izy ireo ny antony tsy anaovana azy.
Canaima dia klone iray hafa miaraka amin'ny fanovana anarana homena ny mpanoratra. Ny mpampiasa an'ity bilaogy ity dia mety hanaiky azy ary tsy hahita olana amin'izany satria rindrambaiko maimaimpoana io. Tsy izany koa no olana amiko. Ny olana dia ny fahitanao ny governemanta izay tsy nilaza velively, ary tsy hiteny an'izany izy ary milaza izany fanodikodinana izany ho fahombiazan'ny "revolisiona", raha toa ka zavatra ataon'ny firenena manana Internet izany (izay manana ny faharoa Internet ratsy indrindra eto an-tany). kontinanta).
Ny fanjakana dia tsy afaka mandray ny lohateny hoe fampiroboroboana rindrambaiko maimaim-poana amin'ny volam-bahoaka, izay any amin'ny firenena toa antsika (ao anaty krizy) dia tsy maintsy apetraka amin'ny filàna marina sy azo tsapain-tanana kokoa. Araka ny itiavantsika azy ho mpiaro rindrambaiko maimaimpoana, io vola io dia tsy nampidirina tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana miaraka amin'ny hevitra hampiroborobo ity sampan'ny haitao ity ho tanjona lehibe indrindra. Tsy latsa-danja noho izany ny fanohanana antoko politika nefa dia atao miharihary.
Ary farany, avelako ny taratra ho an'ireo namana izay maniry hampihatra an'io karazana fepetra io any amin'ny fireneny (Canaimitas + Canaimas). Ny tena marina dia hevitra tsara raha ampiharina tsara, ny fanomezana fitaovana hanokatra tontolon'ny fahafaha-manao amin'ny alàlan'ny fahalalana. Hevitra izay miantso ny handinika ary manana ho toy ny firesahana ireo mpandraharaha lozisialy sy mpandraharaha teknolojia manerantany.
Saingy, ny iray amin'ireto fepetra ireto dia ny antony mahatonga ny fihetsika tsy mahalala henatra novolavolaina teto amin'ny fireneko. Rehefa zatra ny fiaraha-monina iray izay tsy maintsy omen'ny fanjakana ny zava-drehetra, avy amin'ny sakafonao, ny tranonao, ny karamanao, ny "fanabeazana" anao, dia tsy misy antony manosika ny fiaraha-monina hanatsara izany. Mila miandry fotsiny ianao mba ho voavaha ny filanao fa tsy misy faniriana handroso, hifaninana, hahafantatra fa mety ho lasa tsara kokoa izy ireo (andao avelantsika handrisika ny vola). Isan'andro hitako izany any amin'ny fireneko ary satria efa fantatro azy voalohany, dia hitako lavitra izany any amin'ny firenen-kafa.
Ahoana no tsy itovizan'ny orinasa manararaotra ny mpanjifany na "dependant" amin'ny fanjakana manao izany?
Linuxero dia tsy manimba ny bilaogy ianao raha mamela an'ity karazana fanehoan-kevitra ity, ny mifanohitra amin'izay aza dia maro amin'ny olona toa ahy no mankasitraka ny fotoana tokony hanehoana sy hanazava fa ity distro ity dia singa iray ihany amin'ny fampielezana politika ataon'ny governemanta. Ny tsy famelana ireo antso ireo hisarihana ny saina dia ny famelana ny rindrambaiko maimaimpoana hihevitra ny tenany ho "fahombiazana" amin'ireo foto-kevitra izay mihoatra ny voaporofo, tsy mamela ny olombelona hiroborobo. Araka ny nolazain'izy ireo: Mandresy ny ratsy rehefa tsy manao na inona na inona ny tsara.
Valiny tamin'i Danilo Anderson
Fivoriana faha-6: Rindrambaiko maimaim-poana sy orinasa
Idempiere, ny Open Source Erp miaraka amin'ny haitao OSGI